Petkit Pura X, bhokisi remarara rekitsi yako yakangwara uye inozvichenesa | Gadget nhau
Miguel Hernandez | 13/12/2021 14:00 | Yakagadziridzwa ku 15/12/2021 13:00 | General, Reviews
Kana uine katsi, unoziva kuti bhokisi remarara rinogona kutyisa, kana uine maviri kana kupfuura, ini hapana chandichakuudza. Nekudaro, iwe unotoziva kuti paActualidad Gadget tinogara tiine akanakisa akabatana dzimwe nzira dzekumba kuitira kuti hupenyu huve nyore kwauri uyezve kune vako vaunoda mhuka dzinovaraidza.
Isu tinotarisa kune itsva Petkit Pura X, bhokisi rakangwara remarara rinozvichenesa uye rine toni yezvinhu zvinoshamisa. Ziva nesu kuti ungaonekana sei kune basa rinonetesa rekuchenesa kitty bhokisi remarara, mese muchazvitenda, muchawana muhutano uyezve nekufamba kwenguva.
2 Mabasa makuru
3 Zvirongwa uye nzira dzekudyidzana nebhokisi rejecha
Takatarisana nepakiti hombe, ndoda kuti nditaure yakakura kwazvo. Kure kubva pane zvaungafungidzira kuve bhokisi rejecha, zviyero zvakakura, isu tine chigadzirwa chinoyera 646x504x532 millimeters, kureva, chakareba semuchina wekuwachisa, saka hatizokwanisi kuchiisa chaizvo mune chero kona.. Nekudaro, dhizaini yayo inoperekedza, inovakwa muABS purasitiki yekunze chena, kunze kwenzvimbo yepasi, iyo ine grey grey, pachange paine stool deposit.
Kunhuwa kubvisa mvura
Garbage bag package
Kumusoro isu tine chivharo chakaita kakukomberedzwa zvishoma kwatinogona kusiya zvinhu zvakamira, kumberi kune diki LED skrini inozotiratidza ruzivo, pamwe chete nemabhatani maviri ekudyidzana. Pamusoro pazvo, pasuru yacho inosanganisira kameti kadiki kanotibvumira kuunganidza zvisaririra zvejecha izvo katsi yaigona kubvisa, chinhu chinoongwa zvikuru. Huremu hwese hwechigadzirwa i4,5Kg saka haina kunyanyisa kupenya zvakare. Isu tine kupedzisa kwakanaka uye dhizaini inonakidza, inotaridzika zvakanaka kunyangwe mune chero kamuri, nekuti sezvatichaona pazasi, kuitwa kwayo kwakanaka zvekuti isu hatizove nematambudziko mune izvo.
Bhokisi remarara rine nzira yekuchenesa yakavakirwa, kana tikacherechedza mukati maro, pane dhiramu (apo marara ekati achange aripo uye paanozozvisunungura). Iyo yekuchenesa sisitimu yakaoma, saka isu hatisi kuzogara pane tekinoroji uye engineering ruzivo, asi pane mhedzisiro yekupedzisira iyo Petkit Pura X inotipa, uye muchikamu chino isu tinofara chaizvo nemiedzo yakaitwa.
Isu hatifanirwe kunetseka nezve chokwadi chekuti ine mechanichani, sezvo bhokisi rejecha rine otomatiki yekuchenesa sisitimu yatinofanira kugadzirisa kuburikidza nekushandisa, zvisinei, ine akasiyana masensa, huremu uye kufamba, izvo zvinodzivirira iyo Pura Petkit X inoenda. mukushanda kunyangwe jack iri padyo zvakanyanya kana mukati. Muchikamu chino, kuchengetedzeka uye runyararo rwefeline yedu diki inovimbiswa zvizere.
Jack inlet dhayamita: 22 masendimita
Yakakodzera mudziyo uremu: Pakati pe1,5 uye 8 Makirogiramu
Hukuru hwejecha huwandu: Pakati pe5L ne7L
Yekubatanidza masisitimu: 2,4GHz WiFi uye Bluetooth
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyo pasuru inosanganisira akatevedzana ezvishandiso, aya mana magaba emvura inonhuhwirira eliminator, pamwe nepasuru yemabhegi kuunganidza tsvina. Kunyangwe chigaba chechigaro chine saizi yakasarudzika, handifunge kuti pane dambudziko rakawandisa kushandisa chero mhando yebhegi diki, zvisinei, tinogona tenga mabhegi uye zvinobvisa kunhuwa zvakasiyana pamutengo kugutsikana paPetkit webhusaiti. Ehe, izvi zvishongedzo zvinowanikwawo mukati PETKIT Inozadzazve ....
Nezve zvishongedzo, huwandu hwemhando yemudziyo uye nezvimwe zvese zvakaoma zvePetkit Pura X, isu takagutsikana, isu tichafanirwa kutsaurira chikamu chose kune ese mashandisirwo uye akasiyana masystem masisitimu. zvirongwa.
Zvirongwa uye nzira dzekudyidzana nebhokisi rejecha
Kuti tigadzirise, isu tichangofanira kurodha application Petkit inowanikwa kune ese ari maviri Android kana iOS zvachose pasina muripo. Kana isu tapedza iyo yekumisikidza application uye maitiro ekunyoresa, isu tichapinda kuti tiwedzere ichi chishandiso chiri mubvunzo, isu tichakumbirwa kutevera mimwe mirairo nemabhatani ePura X, zvisinei, kana uine mibvunzo, tinokurudzira Iwe. unogona kuona vhidhiyo yatakarodha kune yedu YouTube chiteshi tichiongorora iyo Pura X apo isu tinokuratidza maitiro ekugadzirisa nhanho nhanho.
Chishandiso chinotibvumira kuchengeta rekodhi yakadzama yenguva dzinoenda chipfuyo chedu kubhokisi rejecha, pamwe neadzo ekuchenesa marongero, zvese otomatiki uye manyorero. Uye isu tinokwanisa kuidzima, kuenderera mberi nekucheneswa nekukasira kuronga kubviswa kwemunhuwi ipapo. Kune zvimwe zvisungo isu tinogona kuita iyo «Smart Adjustment» inowanikwawo mukushandisa. Mukuwedzera, mune ino registry tichakwanisa kuona kusiyana kwehuremu hwekati yedu.
Huremu uhu hwekatsi hucharatidzwa ipapo ipapo pachiratidziro che Yakachena X, izvi zvinotipa ruzivo nezve mamiriro ejecha, kutizivisa isu patinofanira kurishandura, nenzira imwechete iyo zviito zvese zvinopihwa nechikumbiro zvinogonawo kuitwa zvakananga nemaoko kuburikidza nemabhatani maviri chete emuviri ayo Petkit Pura X inoumbwa nawo.
Pasina kupokana, ichi chakaita sekunakidza kwazvo chigadzirwa, unogona kuchitenga nacho Powerplanet Online semugovera zviri pamutemo wechigadzirwa pano muSpain, kana kuburikidza nemaitiro ekunze kubva kune mamwe mawebhusaiti. Pasina kupokana, inzira inodhura, yakatenderedza 499 euros zvichienderana nenzvimbo yakasarudzwa yekutengesa, Asi kunyanya kana tiine katsi inodarika imwe chete, inogona kutichengetedza nguva yakawanda, ichitibatsira kuchengetedza hutsanana hwekatsi nehwemumba medu, saka inogona kuva shamwari inokosha muupenyu hwedu hwezuva nezuva. . Takazviongorora, takakuudza nezve ruzivo rwedu zvakadzama uye zvino zviri kwauri kuti usarudze kana zvakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Petkit Pura X, bhokisi remarara rekitsi yako yakangwara uye inozvichenesa